FBC - Ibsa haala yeroo irratti ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa balballoomsu
Finfinnee, Qaammee 1,2008(FBC) -Ibsa haala yeroo irratti ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa balballoomsu
“Toorri haaromsaa keenya har’as imala jijiiramaa eegalame finiinsudhaan fayyaddamummaa ummata Oromoo caalmaatti mirkaneessuuf tarkaanfataa jira.”
Ummatni naannoo fi biyya keenyaa fedhiifi faayidaa isaanii mirkaneeffachuudhaaf qabsoo bara dheeraa gaggeessaa turaniin injifannoo boonsadhaan eega xumuranii waggoota 25 lakkoofsisaniiru. Sirna heerawaa dimokaatawaa fi federaalawaa fedhii guutuu isaanitiin eegga ijaarratanii asittis guddiina siyaas diinagdee amansiisaa gonfachuurratti argamu. Waggoota kanneen keessatti guddina diinagdee itti fufiinsa qabu fiduudhaan ummatni naannoo keenyaa jiruufi jireenyasaa fooyyefachuu, mirgoota dimokraasiifi namoomaa isaa kabachiifachuudhaan jijiirama olaanaa gnfachuu danda’eera.
Ummatni naannoo keenyaa sirna ofiisaa ittiin ofbulchu bu’ura cimaarra dhaabudhaan imala haaromsa biyya keenyaa fuulduratti tarkaanfachiisuurratti argama. Injifannoo kana galmeessuu keessatti gaheen ummataa olaanaa yoo ta’u, haala kana gahumsaan ogganuudhaan mootummaan nqaannoo oromiyaa imala haaromsaa keenya milkeessudhaaf sosochii cimaa gochaa tureera. Guddina argamaa jiru faanaa ummatni fedhiin misoomaa isaa daran dabaleefi sadarkaa hundatti gaafataa ta’e uumamuu danda’eera.
Haalli kun akkuma eegametti ta’ee rakkooleen bulchiisa gaarii deemsa guddiinaa faana nuqunnamaa dhufan marii hawaasa waliin taasifameen adda bahanii furmaata argataa kan jiran yoo ta’uu kanneen hafaniis ummatniifi mootummaan karoora addaatiin deebii itti kenuudhaaf tumsa olaanaa taasisuurratti argamau . kanaaf Gaaffilee bulchiisa gaarii misoomaa fi fedhii guddinaarraa ummatni kaasaa jru ilaalchisee mootummaan akkuma waadaa galee jiru dhaawaataan hiikurratti qophii ta’usaa irra deebiin mirkanessuu barbaada .
Haa ta’u malee, humnootni farra nageenyaa fi dhiphootaa fedhii qaxxaamuraan aangoo qabachuu isaanii dhugoomsudhaaf jecha gaaffilee ummataa, misoomaa fi bulchinsa gaariirattii xiyyefatanii dhihaatan hikamaa jiranuu fedhii isaaniitti jallisuudhaan naannoo keenya naannoo jeequmsaa taasisuudhaaf kufanii ka’uurratti argamu. Kanuma faanaa sirna heeraan ijaarae humnaan diigudhaaf yaalii godhan ammas itti fufuudhaan faayidaa ummatni Oromoo gabaafi jireenya tasgabbaawaa keessaa argatu dhabsiisudhaaf sirna bittaaf gurgurtaa gooludhaaf socho’aa jiru.
Fedhiin guddinaafi jijiiramaa ummata keenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka deemu ganamumarraa karoorsee hojjetaa kan ture mootummaan naannoo oromiyaa gaaffiin ummataa misoomawaan deebii argachaa akka deemu hojjechuudhaaf kutannoo qabu yeroo addaddaa agarsiisaa tureera. Keessumaa guddinni ummataafi hawaas diinagdee nannnoo keenyaa hanguma dabalaa deemeen rakkooleen bulchiinsa gaarii hiikkachaa fi salphachaa, hirmaannaa ummataatiin furmaata argachaa akka deeman fedhiin mootummaan qabu olaanaadha. Fedhii olaanaa kanas hojiitti hiikudhaan aantummaa ummatummaasaa qabatamaan hojiitiin agarsiisudhaaf sosochii godhu cimsee itti fufa.
Humnootni dhiphootaa fi oftuultotaa carraa jijiiramaafi guddinaa ummatni oromoo qabsoo isaatiin harkasaatti galfate duubatti deebisuudhaaf aggaammii taasisan har’as itti fufanii kan jiran yemmuu ta’u, jireenya ummataa qilee hiyyummaa keessaa akka hinbaane gochuudhaaf carraa misoomaafi gabaa isaa cufuudhaaf wixirfachuusaanii itti fufaniiru. Gaaffii ummata oromoo misoomawaa ajandaa jallataa ofiisaaaniitti qabuudhaan ummata burjaajessuudhaaf ammas abjootuu hindhiisne.
Keessumaa yeroo bara haaraa miira haarawaaan simachuudhaaf ummatnii fi motummaan socho’aa jiran kana keessatti, akkasumas ayyaana Arafaa hawaasni musliimaa karaa nagayaan kabajachuudhaaf socho’aa jiru keessatti gabaafi jireenya ummatichaa gooludhaaf ergaa hammeenyummaa isaanii akkuma baran garaa miidiyaalee isaaniitiin tamsaasaa jiraatanis qonnaan bulaan, daldalaaniifi kutaaleen hawaasaa ummata naannoo keenyaa summii diinummaa isaan facaasan fudhatama dhabsiisee jira.
Humnootni badii kun fedhiinsaanii hanga galma gahetti amantaafi sabummaadhaan walitti bu’iinsa uumuurraa duubatti akka hin deebine qabatamaadhaan agarsiisaa jiru. Gaaffilee bulchiisa gaarii mootummaan hirmaannaa ummata bal’aatiin deebisuurratti argamu jallisuudhaan abdi kutannaa uumudhaaf sosochii taasisan hunda ummatnii fuuldura dhaabachaa akka jiru mootummaan dinqisiifannaa olaanadhaan simata.
Haalli kun ummata naannoo keenya jalaa dhokatee kan hin jirre yoo ta’ellee, burjaajii humnootni dhiphootaa uumudhaaf tumsaa jiraniin ijoolleen ummata oromoo bara haarawaan miira haarawaan jireenya haarawaaf akka hin tumsine, gabaa jeequu, sirna bittaa fi gurgurtaa tasgabbii dhorkuu, geejjiba dhaabuu fi karaa nagayaan warra hojjatee buluu barbaadu suukaneessudhaan jireenya dukkanaa sirna nafxanyaa keessa dabarsinetti nudeebsiuudhaaf halkanii guyyaa socho’aa jiru.
Haa ta’u malee, ummmatni naannoo keenyaafi mootummaaan gochaa sukaneessaa humnootni dhiphootaa jireenya qonnaan bulaa, daldalaa fi qaamolee hawaasaa addaddaarrattii aggaaman kana qolachuudhaaf humnaafi qophii gahaa akka qaban qabatamaadhaan agarssiisaa jiru. Mootummaanis qophaa’ummaa kana daran cimsee jireenya ummata keenyaa tasgabbaahaa gochuudhaaf hojii eegale cimsee itti fufa.
Humnoota badii jireenya ummata keenyaa jeequdhaaf tattaafatan saaxilaa tarkaanfii seera qabeessa fudhachuudhaan olaantummaa heera mootummaa akka mirkaneessu irra deebidhaan mirkaneessuu barbaada. Waan ta’eefis qonnaan bulaa, daldalaafi ummatni naannoo keenyaa sochii daldalaa, jireenya tasgabbaahaafi waliin jireenyaa armaan dura gagageessaa ture cimsee akka itti fufu, bara haarawa miira haarawaadhan misoomaa fi ijaarsa sirna dimokraasii naannoosaa akka cimsatu, nageenya naannoo isaatiif wabii dhaabachuu akka itti fufu waamicha dabarsa.
Oduuwwan Biroo « Mootummaan Naannoo Oromiyaa godina Goondar kaabaatti balaa badiinsaa qaqqabeen gadda itti dhag’ame ibse	Haala yeroo ilaalchisee barreefffama ibsa ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaarraa laatame( guutuusaa) »